कुकुरको पछि लागेर घना जंगलमा गएका बालक हराएपछि खोज्न ३ दिन लाग्यो, हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार गरियो – Sandesh Press
June 4, 2021 290
जेन्सी । घना जंगलमा एउटा बच्चाले ३ दिनसम्म बिताउनु के सामान्य कुरा हो र ? त्यो पनि हिउँले ढाकिएको डरलाग्दो रुसको साइबेरियाको जंगलमा ?
ब्वाँसा र भालुको बिगबिगी रहेको साइबेरिया जंगलमा तीन वर्षको बच्चा सेरिन डोपचटले ७२ घण्टा एक्लै बिताउँदा पनि ति बालकलाई सकुशन उद्धार गरिएको छ ।
जंगलमा हराएका बालक डोपचट कुकुरको बच्चाको पछि लागेर जंगलमा भएको अनुमान गरिएको छ । उनी जंगलको छेउमा रहेको गाउँमा हजुरआमासँग बस्दै आएका थिए ।
बालकलाई गाउँलेसहित स्थानीय प्रहरी तथा एउटा हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार गरिएको हो ।उक्त जंगलमा ह्रिंसक जनावरहरु पनि रहेको र बालक तिनीहरुबाट बच्च सफल भएकोमा अविभावकहरु खुशी देखिएका छन् ।
यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस्। यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ
Nextआजबाट ग्यास ११ सय २० रुपैयाँमा र चिनी ६३ रुपैयाँमा पाइने